यी ५ लक्षणबाट पत्ता लगाउनुहोस् ओमिक्रोन र डेल्टा भेरियन्टबीचको अन्तर - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार यी ५ लक्षणबाट पत्ता लगाउनुहोस् ओमिक्रोन र डेल्टा भेरियन्टबीचको अन्तर
यी ५ लक्षणबाट पत्ता लगाउनुहोस् ओमिक्रोन र डेल्टा भेरियन्टबीचको अन्तर
ओमिक्रोनका कारण भारतमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आएको छ । लगातार दुई दिनयता देशमा नयाँ संक्रमितको संख्या एक लाख नाघेको छ । ओमिक्रोनका अधिकांश बिरामीहरूमा संक्रमणको हल्का वा कुनै पनि लक्षण छैन ।
यद्यपि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले यसलाई ‘भ्यारियन्ट अफ कन्सर्न’ घोषणा गरेको छ । यसअघि भारतमा दोस्रो लहरका लागि जिम्मेवार डेल्टा भेरियन्टलाई पनि ‘भ्यारियन्ट अफ कन्सर्न’ घोषणा गरिएको थियो ।
विज्ञहरूका अनुसार ओमिक्रोन भेरियन्ट डेल्टा जत्तिको घातक छैन । तैपनि भविष्यमा हुन सक्ने शारीरिक समस्याबाट बच्न सचेत हुन जरुरी छ । दुवै भेरियन्टका धेरैजसो लक्षण फ्लूसँग मिल्दोजुल्दा छन्, दुवैमा केही विशेषताहरू छन् जुनबाट यिनीहरूको फरक छुट्याउन सकिन्छ ।
डेल्टा र ओमिक्रोनबीचको भिन्नता बताउने विशेषताहरू:
डेल्टा भेरियन्टका लक्षणहरू हाम्रो शरीरमा १० दिनसम्म देख्न सकिन्छ, तर ओमिक्रोनका लक्षणहरू सामान्यतया ४-५ दिनमा हराउँछन् ।
डेल्टा संक्रमितहरूले उच्च ज्वरो आएको बताउने गरेका छन् भने ओमिक्रोन संक्रमितमा हल्का लक्षण हुनका कारण ज्वरो पनि हल्का हुन्छ ।
डेल्टा भेरियन्टले हाम्रो फोक्सोमा क्षति पुर्‍याउँछ । यसले सम्पूर्ण श्वासप्रश्वास प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । संक्रमणको अवस्थामा बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । साथै, शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन्छ । ओमिक्रोन संक्रमितमा भने यी समस्या देखा पर्दैन । यसले हाम्रो फोक्सोलाई नगण्य क्षति पुर्‍याउँछ ।
डेल्टाका कारणले आएको दोस्रो लहरमा विश्वभर भर्खर कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो । अधिकांश मानिसहरूलाई खोप लगाइएको थिएन, जसका कारण डेल्टाको चपेटामा परेपछि उनीहरू गम्भीर बिरामी परेका थिए । अहिले अवस्था फरक छ । जनसंख्याको ठूलो संख्यामा खोप लगाइएको छ र तिनीहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ, तापनि तिनीहरू ओमिक्रोनबाट संक्रमित भइरहेका छन् ।
डेल्टा भेरियन्टका प्रमुख लक्षणहरूमा सुख्खा खोकी, उच्च ज्वरो, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद र गन्ध गुम्ने आदि छन् । हालसम्म उपलब्ध तथ्यांकअनुसार ओमिक्रोनका प्रारम्भिक लक्षणमा घाँटी दुख्ने र चिलाउने, टाउको दुख्ने, चिसो लाग्ने, खोकी लाग्ने, छालामा दाग देखिने, मांसपेशी दुख्ने र वाकवाकी लाग्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
Previous articleएमालेको जिल्ला अधिवेशन २४ जिल्लाले पायो नेतृत्व : नाम सहित
Next articleधुर्मुस-सुन्तलीले नसकेपछि गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला भरतपुर महानगरले बनाउने